Google Mepu inotizivisa nezve nguva ichatora kusvika kumba kana kushanda | IPhone nhau
Kunyangwe iri kuita zvakanaka Apple neayo mepu sevhisi Apple Mepu, kuvandudza uye kumisikidza kwemabasa matsva airi kuwedzera iri kunonoka zvakanyanya kupfuura zvingatarisirwa nevashandisi. Iyo 3D yekuona kana Flyover, inotibvumidza kushanyira nhamba hombe yemaguta kutenderera pasirese kubva kune ziso reshiri rinotarisa kubva kune yedu iPhone kana Mac nenzira yakapusa.
Nzira dzekutakura vanhu dzakaburitswa neApple muWWDC yekupedzisira kwayakaratidza iOS 9, ndeyekushandisa zvakanyanya kunyanya kune avo vese vanhu vasina nzira yekufambisa uye vanoshandisa zvifambiso zveruzhinji kutenderera guta. kuitiswa kwayo kuri kunonoka kwazvo kupfuura vashandisi vangatarisira.
Iri basa rakanakirawo kune avo vese vanhu vanofanirwa kushanyira guta asi havadi kushandisa tekisi kusvika kunzvimbo dzekufarira. Kunyange Apple ichiramba ichifamba, Google inoenderera nekuwedzera mitsva kuGoogle Mepu sevhisi. Parizvino Google inotipa ruzivo nezve traffic kubudikidza nechikumbiro kuti tikwanise kusarudza imwe nzira kuti tisvike kumba kwedu kana kubasa.
Mukuvandudza kwazvino, iyo Mountain View-yakavakirwa kambani yakangowedzera nyowani yekuzivisa nzvimbo yekuwedzera iyo inotizivisa yenguva ichatora kusvika kumba kwedu kana kubasa izvo zvatakambo gadzira, hongu. Nenzira iyi tinogona kuongorora kuti zviri nyore here kuenda panguva iyoyo kana zvirinani kunonoka maminetsi mashoma kuti tidaro netraffic shoma.
Uye zvakare, iyi nyowani nyowani yatiunzirawo mukana wekugovana kero dzatinotarisa nenzira iri nyore nevataibata navo. Yakawedzerwawo husiku modhi uye zvikamu zvekufamba mukufamba zvakagadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mepu inotizivisa nezve nguva ichatora kusvika kumba kana kushanda